Australia oo u digtay dadka sharci-darrada dalkeeda ku jooga - BBC Somali
Australia oo u digtay dadka sharci-darrada dalkeeda ku jooga
Image caption Xeryaha la dajiyo dadka magangalyo doonka ah
Wasiirka Socdaalka Australia ayaa ku dhawaaqay in in ka badan 7 kun oo qof oo doonyo ku soo galay dalkaasi ay qasab tahay inay caddeeyaan inay qaxooti rasmi ah yihiin, ama la dhoofin doono.
Peter Dutton ayaa sheegay in kuwa diidanaa amaba ku guuldaraystay inay codsiga qaxootiga ay qasab tahay inay caddeeyaan inay u baahan yihiin mangalyada Australia ugu dambeyn kowda bisha Oktoobar.
Petter Dutton wuxu sheegay in arrinkani uu khuseeyo dadka doonyaha ku yimid Australia intii ay dawladdii hore ee xisbiga Labour-ku hogaaminayey talada dalka haysay.
Waxaanu ku dooday in dadka aan sida rasmiga ah magangelyada u dalban ay dalka kaga baxdo lacag dhan boqol iyo sideetan milyan oo doolar sannadkiiba.
Shantii sannadood ee ka horreeyey sannadkii 2013 kii ayaa waxa dalkaa galay konton kun oo qof oo magangelyo doon ah oo ka yimid Afghanistan, Sri Lanka iyo Bariga Dhexe oo ka badbaaday safarro halis ahaa oo ay doonyo aan adkayn kaga soo gudbeen badda oo ay ku gaadheen xeebaha Australia.
Dawladdu waxay intaa wixii ka dambeeyey soo saartay qawaaniin adag oo ay doonaysay in ay xayn daab ku noqdaan dadka magan gelyo doonka ah oo waxa ay xeryo uga furtay jasiirado dalkeeda ka baxsan.
In ka badan todoba kun oo qof oo aan diiwaan gashanayn oo dalka Australia galay intii aan la soo saarin qawaaniintan adag ayaa qabay in ay ka nabad galeen in la geeyo xeryahaa dalka dibaddiisa ah, haseyeeshee sidaa ay filanayaan wax uma dhacayaan.
Qudhooda ayaa halis ugu jira in dalka laga masaafuriyo hadii ay keeni waayaan caddaymo sharci ah oo muujinaya in ay yihiin qaxooti dalka magangelyo ku jooga.